Wings DAO စျေး - အွန်လိုင်း WINGS ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို Wings DAO (WINGS)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ Wings DAO (WINGS) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ Wings DAO ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
Market ကဦးထုပ်: $1 694 128.00
volume_24h_usd: $1 663 080.00
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ Wings DAO တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
Wings DAO များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
Wings DAOWINGS သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.163Wings DAOWINGS သို့ ယူရိုEUR€0.138Wings DAOWINGS သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.125Wings DAOWINGS သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.149Wings DAOWINGS သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr1.46Wings DAOWINGS သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.1.03Wings DAOWINGS သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč3.61Wings DAOWINGS သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł0.608Wings DAOWINGS သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.216Wings DAOWINGS သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$0.228Wings DAOWINGS သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$3.62Wings DAOWINGS သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$1.26Wings DAOWINGS သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$0.875Wings DAOWINGS သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹12.2Wings DAOWINGS သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.27.51Wings DAOWINGS သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$0.224Wings DAOWINGS သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$0.249Wings DAOWINGS သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿5.07Wings DAOWINGS သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥1.13Wings DAOWINGS သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥17.39Wings DAOWINGS သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩193.37Wings DAOWINGS သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦63.12Wings DAOWINGS သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽11.95Wings DAOWINGS သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴4.48
Wings DAOWINGS သို့ BitcoinBTC0.00001 Wings DAOWINGS သို့ EthereumETH0.000424 Wings DAOWINGS သို့ LitecoinLTC0.003 Wings DAOWINGS သို့ DigitalCashDASH0.0018 Wings DAOWINGS သို့ MoneroXMR0.00183 Wings DAOWINGS သို့ NxtNXT12.71 Wings DAOWINGS သို့ Ethereum ClassicETC0.024 Wings DAOWINGS သို့ DogecoinDOGE47.02 Wings DAOWINGS သို့ ZCashZEC0.00198 Wings DAOWINGS သို့ BitsharesBTS5.02 Wings DAOWINGS သို့ DigiByteDGB5.21 Wings DAOWINGS သို့ RippleXRP0.579 Wings DAOWINGS သို့ BitcoinDarkBTCD0.00562 Wings DAOWINGS သို့ PeerCoinPPC0.541 Wings DAOWINGS သို့ CraigsCoinCRAIG74.24 Wings DAOWINGS သို့ BitstakeXBS6.95 Wings DAOWINGS သို့ PayCoinXPY2.84 Wings DAOWINGS သို့ ProsperCoinPRC20.44 Wings DAOWINGS သို့ YbCoinYBC0.00009 Wings DAOWINGS သို့ DarkKushDANK52.29 Wings DAOWINGS သို့ GiveCoinGIVE352.92 Wings DAOWINGS သို့ KoboCoinKOBO37.12 Wings DAOWINGS သို့ DarkTokenDT0.15 Wings DAOWINGS သို့ CETUS CoinCETI470.63